Ammaanka Xarunta Baarlamaanka Somalia oo si wayn loo adkeeyay xilli ay Maanta leeyihiin Fadhigoodii ugu horeeyay Golaha Shacabka. – Hornafrik Media Network
Ciidamadda Ammaanka ayaa isku gadaamay dhamaan Jidadka soo galla Xarunta Baarlamaanka Somalia. Waxaana la xiray dhamaan Wadooyinka soo galla Xaruntaasi, iyadoo sidoo kale Ciidamadda AMISOM ee illaaliya Xarunta Golaha Shacabka la galiyay Feejignaan dheeriya.
Tallaabadan lagu adkeeyay Ammaanka Xarunta Baarlamaanka ayaa imaanaysa Xilli ay Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Somalia u gudbiyeen Gudoonka cabasho la xiriirta in la waddo Abaabul iyo Kicin Bulsho oo ka dhan ah Baarlamaanka, taasoo ay ku eedeeyeen Xukuumadda uu hogaamiyo Raiisul Wasaare Khayre.
Khayre ayeey Shalay wax ka waydiiyeen Guddiyadda Joogtadda Baarlamaanka Somalia eedaymaha loo jeediyay oo intooda badan uu iska fogeeyay in Xukuumadiisa ay ku lug leedahay. Wuxuuna ballan qaaday in Xukuumadiisu ay Damaanad qaadayso Ammaanka Baarlamaanka Somalia.
Gudaha Xarunta Baarlamaanka oo inta badan aan looga baran in la galiyo Ciidamo ayaa Maanta lagu arkayay Cutubyo ka tirsan Booliska iyo NISA oo xittaa sugaya Ammaanka Gudaha Hoolka ay Xildhibaanaddu ku shirayaan. Waxaa sidoo kale aad loo hubinayay dadka galaya Xarunta Golaha Shacabka, iyadoo la bixiyay amar ah inaysan galin karin Xaruntaasi qof aan ahayn Xildhibaan, Shaqaale Baarlamaan, iyo Wariye la casuumay.
Fadhigan Xildhibaanadda ayaa ah kii ugu horeeyay ee ay yeeshaan tan iyo Sabtiddii markii uu furmay Kalfadhiga Baarlamaanka. Waxaana loo qaybiyay Maanta Miisaaniyadda Dawladda oo horay ay u soo ansixiyeen Golaha Wasiiradda, taasoo laga doodi doono marka ay soo dhamaystaan Akhriskeeda Mudayaasha Baarlamaanka.
Baarlamaanka Somalia oo ah Hay’adda Sharci Dajinta Dalka iyo Xukuumadda Somalia ayaa waxaa ka dhex jira kala shaki mid kastaa uu ku eedaynayo kan kale inuu wado Abaabul ka dhan ah.